Wednesday November 11, 2020 - 16:37:48 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Amiir Khaliifa Bin Salmaan Aala Khaliifa oo ahaa R/wasaarihii dowladda Baxreyn ayaa ku dhintay isbitaalka Mayo Clinic ee kuyaalla wadanka Mareykanka halkaas oo bilihii lasoo dhaafay uu ku xanuunsanayay.
Diiwaanka Malakiga Baxrayn ayaa bayaan uusoo saaray ku xaqiijiyay geerida R/wasaaraha waxaana shaqo joojin KMG ah lagu sameeyay dhammaan wasaaradaha xukuumadda muddo sedax maalmood ah oo ay socon doonto baroordiiqda loo sameynayo daaqigan halaagsamay.
Aaska loo sameynayo Meydka Khaliifa Bin Salmaan ayaa laxadiday waxaana ka qeyb geli doono oo kaliya dad aan badnayn oo katirsan qoyskiisa sababa laxiriira cudurka Carona Virus.
R/wasaaraha dhintay ayaa xilkan hayay muddo 50 sano oo xiriir ah, wuxuu xilka qabtay sanaddii 1970-ki isagoo 35 sana jir ah, xalay markii uu dhimayay ayuu jiray 85 sano wuxuuna dhashay sanaddii 1935-tii.
wuxuu ahaa nin dabadhilif ah oo xaadiri jiray shirarka caalamiga ah ee lagu go'aaminayay duullaannada saliibiga ah ee Mareykanka iyo xulufadiisa ay ku qaadeen wadamada caalamka islaamka.
inta badan badan madaxda dowladaha dawaaqiidda Khaliijka carabta xilalka ay hayaan lagama qaado illaa ay geeridu uga timaad